The Ab Presents Nepal » लिपुलेक भारतको हो नेपालीहरु रोडमा आएर नाटक गर्छन : मुकुन्दे
लिपुलेक भारतको हो नेपालीहरु रोडमा आएर नाटक गर्छन : मुकुन्दे
काठमाडौं -: नेपालमा यति सिमा विवादको विषय निकै चर्किएको छ । यसै क्रममा समसामयिक बिषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै सामाजिक संजालमा आलोचना र चर्चामा आइरहने मुकुन्द घिमिरे मुकुन्देले सिमा विवादको बिषयमा कडा तरिकाले आफ्नो धारणा राखेका छन् । सामाजिक संजालमा मुकुन्देले लेखेको पोस्ट यतिबेला निकै चर्चामा छ । के लेखेका थिए मुकुन्दे ले ?हेर्नुहोस जस्ताको त्यस्तै उंहाको स्टाट्सहरु ।
भारतको डरले को-को मान्छे कति-कति मात्रामा दुब्लाए? कालापानीमा इन्डियन आर्मी देखेर क-कसको सातो गयो? के यसको एक्कीन अध्ययन गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने त? भगवान जस्तो छिमेकी भारतसँग डराउनु पर्दैन, उसको आह्रीसले दुब्लाउनु हुँदैन, महान हिन्दुस्थान र पवित्र हिन्दुराज्य आमाछोरी जस्ता हुन्।भारतमा आज हिन्दु मुस्लिम दंगा हुनसक्छ? यहाँ नेपालसम्म सामाजिक सद्भाव भंग हुनसक्छ, भत्कियो बाबरी मस्जिद ठडियो राम मन्दिर, जे जे भयो ठीकै भयो अदालतले त्यही भन्दिरा´